माधव नेपालसहित पूर्वमाओवादी घटक एक हुँदै, डकुमेण्ट लेख्ने जिम्मा बाबुरामले पाए !
काठमाडौं । विभिन्न समूहमा विभाजित भएका पूर्वमाओवादी घटकहरु एक हुने तयारीमा जुटेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेका पार्टीहरुबीच सके पार्टी एकता र नभए संयुक्त मोर्चा बनाउने तयारी भएको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
पार्टी एकताका लागी माओवादी अध्यक्ष दाहाल, जसपाका संघीय परिषदका अध्यक्ष भट्टराई र वैद्यको बीचमा विभिन्न चरणमा छलफल भइसकेको छ । १० वर्ष जनयुद्ध लडेर आएका नेताहरु दाहाल, डा। भट्टराई, बैद्य र नेत्रविक्रम चन्दले शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै अलग अलग पार्टी बनाएका थिए ।
पूर्वमाओवादी घटकमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत लोकतान्त्रिक) बीच समेत पार्टी एकता वा संयुक्त मोर्चा बनाउने तयारी भएको छ । माओवादी केन्द्रका युवा नेता विशाल खड्काले पुर्व माओवादी शक्तिबीच पार्टी एकता र अरु वामपन्थी पार्टीहरुसंग गठवन्धन निर्माण गरेर जाने विषयमा छलफल चलिरहेको बताए ।
साथै जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. भट्टराई अहिले जिल्ला दौडमा छन् । उनले विभिन्न जिल्लाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुसँग प्रत्यक्ष संवाद सुरु गरेका छन् । कम्युनिष्ट घटकहरुसँगको एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भइरहेका बेला डा। भट्टराईले जिल्ला पुगेर आफ्नो पंक्तिलाई एकतावद्ध राख्ने कोशिस गरेका छन् ।
‘बाबुरामजीले नयां पार्टीको डकुमेण्ट लेख्ने काम गरिरहनुभएको छ । सके उपेन्द्रसहित पार्टी एकता नै हुन्छ नभए माओवादी घटकबीच पार्टी एकता गरेर अरु दलहरुसंग संयुक्त मोर्चा बनाएर अघि बढ्ने कुरा हुन्छ ।’ स्रोतले काठमाण्डुपाटीसंग भन्यो ।
#डा. बाबुराम भट्टराई#प्रचण्ड#माधब नेपालनेकपामाओवादीमोहन बैद्य